I-Web esebenzayo yokuSebenzisa i-Freeware - Iseluleko se-Semalt
Umbono wokuphelisa yonke imingeni ngokufumana ulwazi kwesi sixhobo. Ngamanye amagama, isakhiwo sakhiwe ukwenza kube lula ukuba abantu babe nokufikelela kwiinkcukacha ezilungisiweyo.
Ngoko ke, iingxaki ezinkulu zokuqokelela idatha ziye zachithwa ekwakheni kwesi sikhokelo sewebhu i-freeware. Abasebenzisi ngoku baya kuchitha ixesha elide ekufundeni nasekuhlaziyeni ulwazi oluncedo kunokuba bafune ukufumana ulwazi.
Ngokucacileyo, injongo ephambili yale sixhobo kukukwenza ukukhutshwa kwedatha kulula kakhulu. Esikhundleni sokusebenzisa izixhobo zokucoca idatha eziqhelekileyo ezinzima kunomntu ongekho ubugcisa ukuqonda okanye izixhobo ezingenakusebenza ekusebenziseni i-website eziyinkimbinkimbi, unokusebenzisa okulula ukuyisebenzisa kodwa isicacile .
Xa ufumanisa ukuba ixesha kunye nezinye izixhobo eziye zadityaniswa ekuhlanganisweni kwedatha, uya kuqonda ukuba kunesidingo esinzima sesebenzisi esinokuguquguquka kodwa esinamandla.
I-ParseHub inikeza abaphuhlisi ngokupheleleyo ukulawula malunga nendlela abanokuyilungisa ngayo nokuguqula izinto ukuze bangadingi ukulwa nomhloli wewebhu we-browser. Ngeli sixhobo, akufuneki ukuba babhale nayiphi na ikhowudi yokukhangela idatha kwakhona. Oku kungenxa yokuba i-ParseHub inokusebenza kwiifom, ukuphahlazeka, ukuqinisekiswa, ukungaphumeleli kwemephu, iimephu ezibandakanyekayo kunye nezinye ezininzi ngokulula.
Okona kubaluleke kakhulu, abasebenzisi abayidingi naluphi na ulwazi lobuchwepheshe bokusebenzisa isixhobo. Njengomsebenzisi, konke okufuneka ukwenze ukuvula iwebhusayithi kwaye ukhethe yonke inkcazelo ofuna ukuyikhupha. 3)
Konke okufuneka ukwenze ukukhomba uze uqakraze kuzo zonke izinto ofuna ukukhipha kwikhasi lewebhu. I-ParseHub ayiyikukhipha kuphela yona, kodwa iya kukunceda ukuba uqaphele izinto ezifanayo kwamanye amaphepha ewebhu Ukwenza ukuba inkqubo ibe lula kwaye ibe mfutshane kuwe.Ungagqiba nokugqiba ukusuka ekulula ukwenza inkqubela phambili ukuze ujonge ezinye izinto eziphambili.
Lo mbandela wenza kube lula ukuthabatha idatha kunye I-API ikuvumela ukuba uyikhuphe idatha kwiifom ze-JSON okanye ze-CSV.
Isixhobo singakwazi ukubona iipatheni kwisicatshulwa sakho sedata, kwaye siya kuyisebenzisa ukukhupha imiyalelo yakho yokulandelela Ikwa kunika inkululeko yokuguqula abakhethi beCSS kunye neempawu zequmrhu.
I-ParseHub inokuphatha kalula iiwebhusayithi kunye namawaka amaphepha axhunyiwe kunye. Konke okufuneka ukwenze kukhupha isethi eyahlukeneyo yemfundiso kwikhasi ngalinye, kwaye unokudibanisa onke amaphepha kunye ngokuchofoza iqhosha elinye.
Zonke izicelo zihanjiswa kwiziko elikhulu le-IPs ukukhusela ubumfihlo bebasebenzisi.
Idata yakho igcinwe kude ngokufikelela kwakho nayiphi na ixesha. Unokucwangcisa kwakhona ukuba ufuna ukufumana idatha yakho. Unokwenza kanye kanye ngenyanga, yonke imihla, nganye ihora, nokuba nayo yonke imizuzu. Kukho konke kuwe.